Midea Sensia HW Isixhobo Somoya - Imagazini yoyilo
Isixhobo Somoya I-Midea Sensia inyusa umgangatho wobomi kunye nendlela yokubonisa into yokuhonjiswa. Ngaphandle kokuhamba kokuhamba komoya kunye nokuzola, ibonisa iphaneli yokuchukumisa enamandla enika ukufikelela kwimisebenzi kunye nemibala yombane kunye nobukhulu. Unyango lombala encedisa kwinkqubo yokulwa noxinzelelo, ukuvelisa iimveliso ezintsha ngeendlela zombini, ukuba zintle kunye nobuhle. Ukongeza kubuhle obahlukileyo, iimilo zawo zidibanisa ingaphakathi lekhaya zombini kunye nobuhle nesitayile, exabisa indlu ngokukhanya okungathanga ngqo.
Igama leprojekthi : Midea Sensia HW, Igama labayili : Arbo Design, Igama lomthengi : ARBO design.
Isixhobo Somoya Arbo Design Midea Sensia HW